Iyo Macbook Air inoshanda zvirinani neLinux | Linux Vakapindwa muropa
Zvinotaridza kuti Linux yakaratidza zvakare kuve neyakanakisa mashandiro epasirese. Ivo vanhu vePhoronix vatora Macbook Air uye vanga vachiita kuedza kushoma maererano nekuita zvechikwata ichi, kutora mashandiro eMac OS X 10.11.1 El Capitan uye uchiienzanisa nemamwe masisitimu anoshanda neLinux Kernel.
Iwo masisitimu akasarudzwa aive: Ubuntu 15.10, Fedora 23 uye Antegros mukugadziriswa kwefekitori. Iyo Macbook Air yavakashandisa ine processor Intel Core i5 4250 U, 4GB Ram uye yepamutemo Apple 120GB SSD hard drive.
Iyo Phoronix bvunzo mhedzisiro yakajeka, ese maLinux anoshanda masystem, vane kuita kuri nani kupfuura iyo Mac OS El Capitan munzira zhinji. Kana iwe uchida kuona chidzidzo ichi zvakadzama, une pano.
Chinhu chinonyanya kufarira nezve izvi ndechekuti Macbook Mhepo makomputa akagadzirwa chete kuti ashande neMac OS X, ndiko kuti, mukufungidzira iwo makomputa ayo uyeApple's system inofanirwa kuve yakanyatsogadziriswa uye unomhanya zvirinani kupfuura chero sisitimu yekushandisa.
Apple yakave yakaratidzirwa mune iyi bvunzo, sezvo zvaonekwa kuti mashandiro ayo haana kunaka sezvainoita, kurasikirwa kunyangwe mumiyedzo nemakomputa avoZvinotaridza kuti Apple haisisiri iyo inotungamira uye inotungamira kambani zvayaive uye izvo izvo zvino zvinongorarama zvinobva pachiratidzo chayo.
Nenyaya yechiratidzo ndinoreva kuti Apple inoramba ichishandisa iyo mukurumbira wemari bhizinesi zano, iyo iri kumushandira. Ivo vanotora komputa ine Hardware yakakosheswa mazana mashanu euros, voisa logo yeapuro pairi, vanogadzira yavo yega sisitimu yekushandisa uye vanotengesa komputa ye500 euros uye vanhu vanoitenga nekuti vanobatanidza mutengo wakakwira nehunhu.
Ini ndinoshamisika kuti Apple yaizotengesa zvakadii dai isina kutenga zvakanyanya. Kubva mumaonero angu, iko chete kururamisa kwekutenga Macbook ndiyo kuzvirova dundundu nezvekuva neMacNeichi chikonzero, kunyangwe paine bvunzo dzakawanda dzinotorwa, ivo vanogara vaine vatengi vakavimbika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo Macbook Air inoshanda zvirinani neLinux
zvakanaka oor kuti kune fanboys zvakafanana zvinoitika nevolkan uye dx12 kunyangwe iwe ukavaudza zvakadii kuti vulkan iri nani pakuita multisystem (ini ndinosanganisira windows) zvinoita sekunge vacharamba vachidzivirira windows uye zvandinoburitsa kunyangwe zvashata sei is (for the record that I order cn windows1 uye chokwadi ndechekuti ndinoda xubuntu yangu zvirinani uye iyo steammachine yandiri kukwidza)
Ndinotaura seLinuxero yakanaka yandiri uye ndine Macbook Pro.Zvinhu zvinofanirwa kutaurwa sezvazviri, kwandiri kana ndikanzwa kushanda zviri nani muLinux pane muOSX, ndinonyatsosuwa zvinyorwa zveLinux uye maitiro ekuti chero Maquero kana Windowsero ungagodora, pane ese ari muOSX kuti kana iwe uine zvirambidzo kuti uzviite. Asi kutaura kuti vanhu vanotenga Macbook ku "show off" manyepo makuru, mune yangu ndakaitenga nekuti ndinovenga Windows asi pabasa rangu idzva ndinovimba zvakanyanya paMicrosoft Office, Skype (kwete iyo Linux vhezheni) uye GotoMeeting . Ini ndinoshandisa LibreOffice kugadzira madhayagiramu nemanongedzo emunhu asi kana ini ndichigamuchira magwaro kubva kune vatengi uye ndichifanira kuchinjanisa iwo handikwanise kuzviisa panjodzi yekuve nematambudziko ekuenderana uye chinhu chega pamusika chinondibvumidza kuve neUnix kwandinogona kuisa iyo Yakawanda software yekutengesa inowanikwa pamusika ndeye OSX.
Ndichiri kufunga kuti Linux ndiyo yakanakisa irimo muOS, ndinoishandisa pane imwe PC yangu uye inoshanda chaizvo asi OSX haina kushata zvachose, handisati ndambove nematambudziko nekusagadzikana, kuita kwakaderera, nezvimwe.
Libreoffice inobvumira kuchengetedza mu .doc kuwedzera. Zvakare iwe unogona kuisa hofisi pane linux uchishandisa waini.
Ini ndinoshanda neLibreOffice yezvinyorwa zvemunhu, asi usakanganisa. Kana vakakutumira iyo .doc tsamba yakaitwa muMS Office unogona kuivhura pasina matambudziko muLibreOffice, asi kana vakakutumira ma .xls ane macros uye maitiro iwe uchave nematambudziko akakomba. Kubasa handikwanisi kugadzirisa mafaira kuti aite seakanaka. Kwenguva yakareba ndakashanda neWine neOffice asi hazvisi kufamba sezvandaizoda. Nzira chete yekushandira Hofisi pasi peLinux nenzira kwayo ndeyekuona maWindows.
Alejandro Oyervides akadaro
Ndine core2duo .. A mac back in 2007./ dinosaur diki iyo kunyangwe hazvo pc yangu ichiramba ichivandudzwa yatononoka .. Chokwadi muchina wacho wakura uye ndinounzwisisa. Saka hazvina kunetsa kwandiri kuyedza ruoko-rwerudyi kuti ndione kana zvichindishandira zvirinani
Pindura kuna alejandro Oyervides
Zvinonyadzisa chaizvo kuti Apple haidyise mari yakawanda mukugadzirisa OS X uchifunga huwandu hushoma hwemamodeli uye pamusoro pemahombekombe makuru avanayo. Kunyangwe kubva ipapo kupedzisa kuti "chikonzero chega chekutenga Macbook ndechekuzvirumbidza nezvekuva neMac" zvinosekesa. Asi iwe haugone kutarisira zvimwe zvakawanda kubva kuchikamu chemavara manomwe chine musoro unopisa kudaro, chero.
Luis Caballero akadaro
Mitengo yeApple yakati rebei, asi kwete mazana mashanu emadhora hauna chaunowana chakafanana, i500 ine 5 kana 4 GB yegondohwe hongu, zvinoitika, asi kana tichida zvimwe zvinowedzerwa senge yepamusoro resolution, hupenyu hwakanaka hwebhatiri. , uye izvo hazvina huremu 8kg isu tinofanirwa kutarisa mhando dzakadai saAsus naDell uye mitengo yavo iri padhuze neiyo yeApple. Ndinozvitaura kubva kuLenovo yangu 3 euros ine 700gb ye RAM uye i8, asi dai ndaive nemamiriyoni mazana mashanu panguva iyoyo ndingadai ndakatenga chimwe chinhu neqhd skrini pachinzvimbo cheiyo hd, inogara bhatiri kusvika gumi kana gumi nemaviri. maawa panzvimbo pe5, uye izvo zvinorema hafu yekirogiramu zvishoma, zvinhu zvisina kukosha kune vamwe asi isu vedu vanoda hunhu uhu titarise michina iri pakati pe500 ne10 euros.
Pindura Luis Caballero
Masource aripi ??? Handisi kuona chinongedzo ...
Pindura kuna Ale Jandro
Ndinozviratidza ... Ndiri murume akura ari mubhuruu ...
Pano desktop linuxer uye laptop macquero. Iko kusununguka kwekushandisa kweMac OS kune mushandisi mushe haina Ubuntu, uko nekukurumidza kana gare gare iwe unofanirwa kuvhura terminal. Zvekumwe kushandiswa tinogona kuzvikurukura, kune avo vanoda komputa panoshanda zvinhu kekutanga vasina kana kiyi, Mac pasina kupokana. Uye kana iwe ukasasiya apple ecosystem (iphone, ipada, macbook), iwe unoda maeuron maviri uye une imwe yasara.
Pindura kuna jsa
Nyaradzo (@nyaradzo) akadaro
Uffff ndosaka ndakatenga Toshiba ChromeBook, handikwanise kushandura makomputa gore rega sekutarisirwa naApple. Muchokwadi, ini ndakatotengesa iyo Mini Mini, iyo yaitaridzika kunge yaizotyoka, ini ndaisada Apple chigadzirwa chiitiko zvachose. Desktop yangu ndeyeCompaq ine W10 yakaiswa zvakachena nerezinesi rekutanga uye iri kuita zvakanaka. Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti iyo Chromebook inodhonza iyo YouTube HD kunge shasha uye iyo pakarepo bhutsu inoshamisa.
Pindura kuna Lucasjurado (@Lucasjurado)
Chinyorwa ichi trolley ... Zviripachena kuti maMac haasi iwo akachipa makomputa pamusika, asi neiyo imwecheteyo technical tekisheni, mitengo yacho haiende zvakanyanya. Uye zvakare, zvinozivikanwa kuti iwo akagadzirwa zvakanaka makomputa, ayo anogara kwenguva refu. MacOS yakagadzikana uye yakachengeteka sisitimu yekushandisa (kupfuura Windows). Ndine Linux chete yakaiswa paAsus laptop neIntel NUC, uye handisi kuzotenga mac, asi kubva ipapo kutaura kuti ivo "vanorarama nekutengesa" kutambanudza pakati pezvokwadi nenhema.
Usataure usingazive zvauri kutaura nezvazvo. Kunyangwe ndichivenga Windows, Windows yakachengeteka zvakanyanya kupfuura MAC. Kutanga iyo windows inogadzirisa madhiragi, kwete semaapuro, kune izvo zvavanochaja, vanogona kushanda zvishoma ...
Pano waenda, saka unogona kudzidza chimwe chinhu nhasi: http://www.gfi.com/blog/most-vulnerable-operating-systems-and-applications-in-2014/
Mhoroi, ndiri mutengesi wemakomputa, uye handibvumirane nenyaya yemutengo. Kana mumwe munhu achifananidza Mac neWindows ine saizi yakafanana, gondohwe rimwe chete, anoigadzirisa ine mhando SSD dhisiki, inowedzera hofisi otomatiki, vhidhiyo yekugadzirisa uye mimhanzi yekugadzirisa zvirongwa, pakupedzisira hakuna mutsauko wakanyanya. Ehezve, kana iwe ukatanga kudhawunirodha software zvisiri pamutemo, zvinhu zvinochinja. Asi Apple, paunotanga komputa yako, unotova ne software yekutanga kushanda! Izvo hazvisi kuti zvirinani, asi zvinotora zvinokunetsa uye zviri kushanda panguva ino. Chokwadi, neLinux, iyo Hardware inoshamisira, asi neyakajairwa Intel PC, iri nani zvakare kupfuura Windows.
Pindura kuna Frankie
Kubva pamutsara wekutanga wepositi ivo vatove varere nemanyepo. Record.
Chinhu chinonakidza chingadai chaive chekuti fananidzo yakanga yaitwa naJosemite (OS yakapera uye yakasimbiswa) pachinzvimbo cheEl Capitan, inozivikanwa kuti ine huwandu hwakawanda hwezvisakarurama, zvakawanda zvekuti kune vamwe vanoshuva kudzosera shure uye dzokera kuYosemite (ona ongororo paApp Store).
Nezve izvo zvasara, pachezvangu ndakave nemukana wekushandisa ma3 OS's (ini ndaive Linux-chete mushandisi kweanopfuura gore rimwe), uye yeiyo 1 ini ndinoda MacOS uyezve Windows. Izvi ndezvekunyaradza kwemushandisi.
Semushandisi weMac, ndinokutendai zvakanyanya nekundidaidza zvisina musoro kuti ndiri benzi rekutenga chishandiso chekungova neapuro yakavhenekerwa pachivharo.
Kusiya uyu musoro padivi, ndine hurombo asi chinyorwa chako chiri kudonhedza kwese kwese:
"Mhedzisiro yePhoronix mhedzisiro yakajeka, ese maLinux masisitimu anoshanda ave nani pane Mac OS El Capitan mune zvakawanda zvinhu"
Ndeapi iwo mativi ayo iwe anokunda? Ini ndasuwa mairafu, tsananguro dzekuti bvunzo imwe neimwe inorevei uye kana aya data akakosha chaizvo kana kuti kwete. Ratidza kuti waita zvinopfuura kungoverenga musoro wenyaya yechimwe chinyorwa uye kuposita chinyorwa chinopisa pano.
“Nekumaka, ndinoreva kuti Apple iri kuenderera mberi nekushandisa hurongwa hwebhizimusi remitengo, huri kuishandira. Vanotora komputa ine Hardware yakakosha pamazana mashanu emaeuro, voisa logo yeapuro pairi, vogadzira yavo yega sisitimu yekushandisa uye votengesa komputa ye500 euros uye vanhu vanoitenga nekuti vanobatanidza mutengo wakakwira nehunhu. "
Unowira mukukanganisa kwechero munhu asina zano remakomputa uye anongotarisa processor ne RAM. Zvakadiniko nezvescreen? Uye iyo SSD disk? Uye iyo trackpad iyo hapana akakwanisa kutevedzera? Uye iyo chinhu chinoshandiswa pakugadzira kwayo? Uye hupenyu hwebhatiri? Ndiudze kamwe "zvakajairika" laptop ye € 500 iri padhuze nekuita kweMacBook Air senge iyo yakashandiswa pakuyedza, iyo nenzira, uye neruzivo rwako, yakatengwa pa € ​​999.
Asi chii chinonzi Linux chakanakira, ini handikwanise kumhanya iWork, iLife, Adobe, Maya, iCloud, nezvimwe, nezvimwe
Enrique Rokudzidzisa akadaro
Ive nekuchenjerera, ivo vanoti zvinoita zviri nani, asi nemutengo upi? nekuti kana iwe ukatora iyo Hardware bareback uye wozvipira iwe kumhanya linux (kana iyo system yaunoda) zvichibva pakubvisa zvese maficha ayo OSX inopa ... tsime, chii chaunoda kuti ndikuudze, ini ndoda kuita zvishoma uye ndine komputa masekondi mashoma inononoka mukugadzirisa kureva kuti, kuchikwata chinokurumidza. Ini ndinoda OSX pane chero vhezheni ye linux zvisinei kuti ingadzoswazve sei uye kuitirwa munhu zvaingave iri
Jesu Suarez akadaro
Ini ndinoshandisa Linux Mint mugiredhi repamusoro (Webhu Kunyorera Kuvandudza), MacBook Pro Retina 2014 (Apple yakanakisa laptop kusvika parinhasi uye kwete yekupedzisira shit yandaida kutengesa) uye ndinoshandisawo Windows 10 pane desktop yangu (iri pakati-renji pc) Uye iyo Linux OS haina nani zvachose, tarisa kuti kuchikoro vadzidzisi vane shungu neLinux, asi usatore maMacOs El Capitan kubva kwandiri, vakagadzirisa mashandiro zvakanyanya, hazvitonhorere zvachose uye inonzwisisika uye yakanaka iyo OS. Ipo iri muLinux yakanaka ... haina kushata, hazvidiwe kuti ureve nhema, inzira yakanaka, asi kwete zvachose inopenya mune yayo interface, uye chinhu chega chakanaka chainacho ndechekuti yakasununguka, asi ini ndinoda kubhadhara chimwe chinhu chemhando yepamusoro uye chakashanda zvakanaka kune chimwe chinhu chiri chemahara uye chisingaitiswe nemazvo. Linux ichokwadi, inopa zvivakwa zvakawanda kutanga zvirongwa kubva kune mamwe maSystem (akadai seWine) asi semushandisi wezuva nezuva weechitatu Anoshanda MaSystem, ini ndinosarudza Mac.Uye kwete zvekuve fanboy kana shit, ini ndinosarudza yakanakisa yenguva uye mumaonero angu ndiMac
Pindura kuna Jesu Suarez
Pufff !! Yakanaka kwazvo posvo. Kutanga, chaunodana kuti OS Mac, sekuzivikanwa nemunhu wese anonzwisisa makomputa zvishoma, iri Unix, UNIX !!! Nongedza imwe. Pfungwa mbiri ... Kufananidza mac komputa nechero ipi hupenzi. Ndakave neMweya kwemakore matatu uye casing haina kumbobvira yakweshwa, simbi nenzira. Bhatiri idzva. Chidzitiro cheMac chinopa 3 kicks kune chero laptop, yakafanana nekam ... Iyo tambo yekuchaja inosvetuka kana paine kudhonza, nekuti ine magineti. Unogona kubvisa sikuru makumi mashanu kuti musoro hauna kubviswa. Nenzira iyo inofanira kuyeukwa kuti ndiyo inogadzira iyo OS uye Hardware, uye zvese zvigadzirwa zvaro zvinosanganiswa zviri nyore. Mac ndiyo imwe ligi.
Pindura kuna Aloe